Rita, Writing for My Sake!: သလ္လာဝတီရဲ့ မြို့၊ သလ္လာဝတီနဲ့ မြို့
Posted by Rita at 6/23/2010 06:20:00 PM
အမ တို့ မန္တလေး မှာလည်း ဒီလို ရေတက်ချိန်ဆိုရင် မြစ်ဆိပ် သွားပြီး ရေကြည့်ရတာ တလုပ် အမလည်း ရေကြည့်ရတာ ကြိုက်တယ်
အမတို့ အိမ်ကတော့ မြစ်ဆိပ်နဲ့ ဝေးတော့ ရေမတက်ဘူး
အင်း အညာကလူတွေကတော့ ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်ရွာကို ခင်တွယ်ကြတယ်
ညီမ မန့်သွားတာကို ဖတ်ပြီး အမဖြင့် အားတွေ ရှိသွားတာဘဲ ကျေးဇူးနော် ညီမ
ဆရာမရေ ကောင်းလိုက်တဲ့ စာဗျာ။ ဖတ်ပြီး ကိုယ်တောင် ဘယ်နားနေမှန်း မသိတဲ့ သလ္လာဝတီမြစ် (စာလုံးပေါင်းပြန်ကြည့်ဦးမှ)ကို လွမ်းသလိုလို…
ကျနော်တို့ဖက်မှာတော့ မုန်းချောင်းရေနဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ရေ နှစ်ခုဆုံတက်ရင် ကြည့်လေရာမှာ ရေဖွေးဖွေးချည်းပဲ။ လူကြီးတွေကတော့ ပျိုးတွေ ပျက်လို့ စိတ်ညစ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ပျော်သည်ပေါ့။ ပျိုးသယ်တဲ့ သစ်သား စွတ်ဖားကြီးတွေကို ရေထဲမှာ စီးတယ်။ ဒါမှမဟုတ် နွားစားခေါင်းကို လှေလုပ်စီးတယ်။း-)
မရောက်တာတောင် ၈ နှစ်လောက်ရှိပြီ..
ခုလဲ ဝါဆိုဝါခေါင်ရေဖေါင်ဖေါင် အချိန်တော့ တကယ်လွမ်းတယ်..
အနောက်မြစ်(ချင်းတွင်း) နဲ့ အရှေ့မြစ်(ဧရာဝတီ) ပြိုင်ပြီးရေတက်ချိန်မှာ ကျွန်းထဲရွာတွေမှာ ရေသွားဆော့လိုက်ချင်သေး...
ကျွန်တော်ကတော့ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမှာ ခုနစ်နှစ်လောက် နေဘူးတယ်။ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမှာ ရန်ကုန်မြိ်ု့အ၀င် မြစ်ကြောင်းက မြို့လေးလေ။ ဆန်စက်တွေပေါတဲ့ တောမကျမြို့မကျပေါ့။ ဘေးမှာလည်း တွံတေးတူးမြောင်းကြီး ရှိသေးတယ်။ ၀ါဆိုဝါခေါင်ဆို ရေတွေကြီးလာရင် တမြို့လုံး ရေမြုပ်တယ်။ ရေမြုပ်တဲ့ အချိန်ကလည်း တစ်နာရီ နှစ်နာရီလောက်ပဲ ကြာတယ်။ ရေတွေကြီးပြီဆို ကျောင်းတွေ စောစောလွှတ်တယ်။ ရေကြီးတဲ့အချိန်ဆို ရှိသမျှလူတွေ လမ်းလျှောက်ထွက်ကြတယ်။ ပျော်စရာကြီး
မြို့အကြောင်းနဲ့ မြစ်ရေကြီးချိန်အကြောင်း ဖတ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်၊ လွမ်းစရာလည်းကောင်းတယ်။ ဇွန်က ရန်ကုန်သူမို့ မကြုံဖူးဘူးတော့ ရီတာရေးတာဖတ်ပြီး ဗဟုသုတလည်းရတယ်။
ရန်ကုန်မှာ ဇွန်လ ကျောင်းတွေဖွင့်ချိန်၊ မိုးတွေရွာချိန်ကို သတိရတယ်။ အိမ်ရှေ့မြောင်းပေါ်ကတံတားလေး ရေမြုပ်ချိန်မှာ လျှောက်ရတာ သိပ်ပျော်တယ်။ မိုးသည်းလို့ အိမ်ရှေ့မြောင်းထဲ ရေလျှံရင်ကိုပဲ သိပ်ပျော်ခဲ့တာ။
မိုးရွာတဲ့မနက်ခင်းတွေမှာ အဲကွန်းခန်းထဲက အလုပ်စားပွဲမှာ လူရှိနေပေမယ့် စိတ်က အဲဒီတုန်းက အချိန်တွေကို ပြန်ပြန်သတိရမိနေတာ။
(မြစ်ဆုံမှာ ရေကာတာဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားကာစက အရမ်းဝမ်းနည်းပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။)
ကိုယ့်မှာလည်းအဲလို ရင်းနှီးရတဲ့ နေရာလေးတွေ
ကိုမှတ်မိစွဲလမ်းလို့ နေရာစွဲရှိချင်တယ် .. ပျော်စရာကောင်းမှာတေ့ာအမှန်ပဲ။
အမလည်း ရန်ကုန်သူမို့ မြစ်ဖျားချောင်းဖျားမနေဖူးပေမဲ့ ရန်ကုန်မှာလည်း ရေကြီးရင် ပေါင်လယ်ထိ မြုတ်တယ်လေ ညီမရယ်...ဟားဟား အဲသလို ကလေးဘဝကို သတိရမိသွားတယ်...အဆော့သန်သူမို့ ရေကြီးရင် သိတ်ပျော်တာ :)
ညီမရဲ့ ဒီလိုရေးဟန်လေးတွေကို ပို နှစ်သက်တယ်...
I also miss SHWE BON THA PHAYA n CHAN THAR GYI MONASTARY.I haveaterrible experience of YE KYEE CHAN IN YSO past four decade ago.